RSS Channel Showcase 3398061
RSS Channel Showcase 9429247
RSS Channel Showcase 3643829
RSS Channel Showcase 9564738
(showing articles 2441 to 2460 of 9878)
10/11/12--23:20: _အပေး..အယူ။ အယူ...အ...
10/11/12--23:57: _နားလည်မှုဆိုတဲ့ အချ...
10/12/12--00:01: _ဒီနေ့ပဲ လိုတယ်
10/12/12--00:18: _ကိုယ့် စိတ်ကိုကိုယ်...
10/12/12--00:52: _ကျနော်နှင့် ကိုစံလင...
10/12/12--01:00: _ရွှေတို့ ရတနာပုံမြို...
10/12/12--01:42: _ချစ်လွန်းလို့ ဖြစ်သ...
10/12/12--02:04: _ကူညီကြပါ ။
10/12/12--02:30: _နှလုံးသားမြို့တော် ...
10/12/12--03:56: _ဂေဟဟိတ ပတ်ဝန်းကျင်ထ...
10/12/12--04:44: _**** သနားချစ်လေးချစ...
10/12/12--05:38: _ရစ်လွန်း၍ ကျန်ရစ်ဖြ...
10/12/12--05:53: _မလေးရှားအဖွဲ့မှ ရခု...
10/12/12--06:07: _“ ဖြူဖွေးရယ် ….. ကေ...
Browse the Latest Snapshot Browsing All Articles (9878 Articles) Live Browser
older | 1 | .... | 121 | 122 | (Page 123) | 124 | 125 | .... | 494 | newer
10/11/12--23:20: အပေး..အယူ။ အယူ...အပေး.။
ပေးဖို့ အတွက်ယူပါ...ယူဖို့အတွက် မပေးပါနဲ့၊ ယူတာမှန်သမျှ ပေးနိုင်ရင် စိတ်မဆင်းရဲဘူး..
ပေးတာမှန်သမျှ ယူနေရင် ဘယ်တော့မှ မပြည့်နိုင်လို့ စိတ်ဆင်းရဲတယ်။
ပေးတာဟာ ပါရမီဖြည့်တာပါ..ပါရမီဆိုတာလည်း ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားမှုဆိုတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့အလုပါတစ်ခုပါ....။…
10/11/12--23:57: နားလည်မှုဆိုတဲ့ အချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေး
ဘ၀တစ်ခုလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ကာ လက်တွဲခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူတွေ ဇနီးမောင်နှံဘ၀ကို ရောက်တော့မှ သူအကြောင်း ကိုယ်အကြောင်းဆိုတာတွေကို ပိုလို့သိရှိလာခဲ့ရသူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ ။ ချစ်သူဘ၀မှာ တွေ့ရချိန်ခဏလေးအတွင်း အကဲခတ်ဖို့ဆိုတာလည်း ခက်တော့ခက်သားလားလေ။ ဒါကြောင့် လူကြီးတွေ ခဏခဏ ပြောနေကြတာပေါ့ ။
အိမ်ထောင်တစ်ခုပြုတယ်ဆိုတာ ကံစမ်းမဲတစ်ခု နှိုက်ရသလိုဘဲ ။ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ကံဆိုးခြင်း ၊…
10/12/12--00:01: ဒီနေ့ပဲ လိုတယ်
စိုးရွံ့တဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ရှိတယ်
10/12/12--00:18: ကိုယ့် စိတ်ကိုကိုယ်နိုင်တယ်
ဒါပေးမဲ့စာဆိုရင် မစွဲလွှမ်းတတ်ကြ
အရက်နဲ့ ဆေးလိပ်ကို သောက်ရင်းနဲ့ 
သင်ခဲ့ ရတဲ့သူငယ်တန်းစာကစပြီ
သင်ခဲ့ ရပါတယ် ဒါပေးမဲ့ စာကို စွဲတယ်လို့မရှိခဲ့ ပါဘူး။ ၇န်ထက်
ညနေဆည်းဆာလေးက ပုဇွန်ဆီရောင်လေးနဲ့ အရမ်းလှနေပါတယ်
ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ရင်ကိုအေးမြစေပါတယ်…
10/12/12--00:52: ကျနော်နှင့် ကိုစံလင်း၏ အရှုပ်တော်ပုံ(၂)
ကဲသူငယ်ချင်းတို့ ရေ အရင်အပတ်က အဆက်လေးကို စောင့်မျှော်နေမယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ
ကျနော်တင်ပြပါ့မယ်ဗျာ စာကိုပြောတာနော် တခြားပြောရဲပါဘူးဗျာ
ဒီလိုနဲ့ ကိုစံလင်းလည်း သူ့ ညီမကို ရည်းစားစာ ပြန်ရေးပေးသလိုဖြစ်သွားတော့တာပေါ့
10/12/12--01:00: ရွှေတို့ ရတနာပုံမြို့တည်..ခုနှစ်ဌာနစုံညီ
10/12/12--01:42: ချစ်လွန်းလို့ ဖြစ်သွားတာပါ
အချို့သူများ နာမည်လေးတွေ အရမ်းလှတာ ကြုံခဲ့ဖူးမှာပါ။ အချို့သူများကြပြန်တော့လဲ နာမည်တွေက ခေါ်ချင်စရာ မကောင်းလောက်အောင် ခေါ်ရခက်သည့် နာမည်မျိုးတွေ ကြုံခဲ့ဖူးမှာပေါ့။နာမည်မလှသူတွေက မိဘတွေကို ဘာလို့ နာမည်လှလှလေး မမှည့်ပေးတာလဲ ဂျီကျလေ့ရှိကြသည်။မိမိနာမည်ကို စိတ်တိုင်းမကျနိုင်ပဲ မကျေမနပ် ရှိနေလေ့ရှိသည်။ မေကိုယ်တိုင်လဲ ငယ်ငယ်က မိဘများကို ဂျီကျလေ့ရှိသည်။…
10/12/12--02:04: ကူညီကြပါ ။
ဘတ်(စ်)ကားပေါ်မှ ဆင်းဆင်းချင်း သတိထားလိုက်မိတယ်။…
10/12/12--02:30: နှလုံးသားမြို့တော် ကဗျာပြိုင် ပွဲ မှလက်ေ၇ွးစင် ငါးပုဒ်ကိုတင်ပြခြင်း
ချစ် သူ့မြို့တော် ကဗျာ ၀ါသနာ၇ှင် အပေါင်းတို့ခင်ဗျာ
နှလုံးသားမြို့တော် ဆိုဒ်တွင် ကဗျာပြိုင် ပွဲကျင်းပလျှက်၇ှိပါသည်။နှလုံးသားမြို့တော်ကဗျာေ၇ွးချယ်ေ၇းအဖွဲ့မှနောက် ဆုံး…
10/12/12--03:56: ဂေဟဟိတ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကွန်ယက်ညှိနှိုင်းရေးမှုး(နှင့် )ကွန်ယက်လက်ထောက်ညှိနှိုင်းရေးမှုး ရာထူး အလုပ်ခေါ်စာ
ရာထူး : ကွန်ယက်ညှိနှိုင်းရေးမှုး(နှင့် )ကွန်ယက်လက်ထောက်ညှိနှိုင်းရေးမှုး
ခန့်အပ်မည့်အချိန်ကာလ : ၁၀ လ(နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ မှ သြဂုတ် ၂၀၁၃ ထိ)
တည်နေရာ : ရန်ကုန်…
10/12/12--04:44: **** သနားချစ်လေးချစ်မိနေပြီ ****
ကျွန်တော်နှင့်ရုံးဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးကို ကုမ္ပဏီက ခိုင်းလိုက်တဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ထွက်လာခဲ့တယ် ရန်ကုန်ကနေ နေ့လယ် ၁၂ နာရီအမြန်ယာဉ်ကားနဲ့ ထွက်လာခဲ့တာ နေ၀င်ရီတယောဖြစ်လာပါပြီ။ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ ညနေဆီးဆာအလှကိုကြည့်ပြီး ပြုံးမိနေတယ်….
ဒီအချိန်မှာပဲ ကျွန်တော်နဲ့အတူပါလာသော ဆက်မောင်က
“ ဟိတ်ကောင် အောင်အောင်…
မြောက်ပြန်လေတိုက်လာပြီ….. ဆောင်းဝင်တော့မည်…. ဆောင်းရောက်ရင် သဇင်ပန်းများပွင့်ပေတော့မည်…..
10/12/12--05:38: ရစ်လွန်း၍ ကျန်ရစ်ဖြစ်ခဲ့သည်
 မင်းကိုမြင်ဖူးတဲ့ နေ့ကစပြီး သိပ်ချစ်သွားတယ် ပြန်ချစ်နိုင်မလားဟင် !
♥♥ ပြန်ချစ်မယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲ ?
10/12/12--05:53: မလေးရှားအဖွဲ့မှ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့အား အကြီးမားဆုံး စော်ကားမှု
မလေးရှားအဖွဲ့မှ ယခုအပတ်အတွင်း ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ ပေးသောကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများထည့်သည့် ပုံးတွင် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ထားသည် ဓါတ်ပုံများ ပါဝင်နေကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။ထိုသို့ပါဝင်ခြင်းများကို ပုံး၏အပြင်ဘက်အား ရေဖြင့်…
10/12/12--06:07: “ ဖြူဖွေးရယ် ….. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ”
သူ့နာမည်ကဖြူဖွေး…နာမည်နဲ့လူနဲ့လိုက်အောင် စိတ်ထားကဖြူတယ်ထင်ပါရဲ့ ကျွန်မစတွေ့
တာကသူ့သူငယ်ချင်း ကိုယ်စားအလုပ်လာလုပ်တဲ့ အခါမှာစတင်တွေ့ရတာပါဘည်း။ အလုပ်
ထဲမှာမနက်ဖက်တွေ့ပြီဆိုရင် Morning လို့နှုတ်ဆက်စမြဲ ညဖက်ပြန်ရင် GoodNight လို့နှုတ်ဆက်စမြဲ
ကျွန်မအလုပ်တွေကိုလည်း အမြင်မတော်ရင်ဝင်ကူတတ်တဲ့ စိတ်ရှိတယ်။…
10/12/12--07:06: ကျက်ကုန်း(ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်း အပိုင်း-၂)
"ကျက်ကုန်းဆိုတာက....အင်း....ဒီမှာပြောလို့တော့ မကောင်းပေဘူး...အာလုံးရွာကို လိုက်ခဲ့ကြပါ။..ကျုပ် အိမ်မှာပဲ တည်းလိုက်ကြ။မနက်ကျ မှ ခရီးဆက်ကြပေါ.။ဘယ်လိုလဲ...မိတ်ဆွေတို့....။"
ထိုလူကြီး ၏ဖိတ်ခေါ်မှုကို လိုက်သင့် မလိုက်သင့်ကားတစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ ဆုံးဖြတ်လို့မရပေ....။သံချောင်း၊ဖိုးထောင် တို့ကိုထည့်တွက်စရာ မလို ။ သူတို့က တောထဲ တောင်ထဲ ကြီးပြင်းလာကြသူများသာ။ဆရာလေးမှာကား မြို့သားလည်းဖြစ်ပြန် လူပုံကလည်း မောပန်းနွမ်းလျှနေသည်မှာ အသိသာ။သူ့စိတ် အမှန်တိုင်းဆိုတော့…